SAWIRRO: ”AC Milan waa naadi la wada yaqaanno dib baana ugusoo celin doonnaa figta sare” – Yonghong Li – Gool FM
SAWIRRO: ”AC Milan waa naadi la wada yaqaanno dib baana ugusoo celin doonnaa figta sare” – Yonghong Li
Raage April 13, 2017
(Milano) 13 Abriil 2017 – Milkiilaha cusub ee AC Milan ee Yonghong Li ayaa u mahadceliyay Silvio Berlusconi isagoo ballan qaaday “inay kooxdan taariikhiga ah dib ugusoo celinayaan figta sare”.
Rossoneri Sport Investment Lux ayaa ugu dambayntii la wareegay kooxda AC Milan iyagoo Berlusconi shirkaddiisa Fininvest faraha ka saaray adduun dhan €830m oo euro.
“Waxaan u mahadcelinayaa Berlusconi iyo Fininvest oo kalsooni noo muujiyay, waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa taageerayaasha Rossoneri ee dunida ku firirsan oo noo dulqaatay,” ayuu yiri Li oo la hadlayay sports.163.com.
“AC Milan waa naadi dunida laga yaqaanno oo leh mid ka mid ah taariikh ugu sharaf badan. Waxaannu haatan soo dhamaystirnay tillaabo muhim u ah dib usoo noolaanshiyaha naadigan, mustaqbalkana waxaannu ballan qaadaynaa in aan kooxda kusoo celin doonno figta sare ee kubadda cagta caalamka”. ayuu yiri Mr Li.
Robert Lewandowski oo diyaar ah 100% iyo Gareth Bale oo shaki laga muujinayo
Lionel Messi oo lagu qalqaalinayo inuu tago xarunta FIFA si looga yareeyo ganaaxa